Egwu "chi" na MetaHuman site n'aka ndị okike nke Epic Games | Gam akporosis
Ndị okike nke Fortnite ga-ahapụ gị ka ị kpọọ "chi" site na ịmepụta mmadụ dijitalụ
MetaHuman Onye Okike bu ihe ohuru nke Epic Games, ndị okike nke Unreal Engine ma ọ bụ Fortnite n'onwe ya, nke ahụ na-eduga anyị ka anyị nwee ike ịmepụta ụmụ mmadụ dijitalụ nke mere na ọ nwere ike ịtụ ụjọ n'ihi oke nkọwa.
Ọ bụ Ọ ga-afọ nke nta ka anyị ga-achọ igwe na-agba ọsọ agụba iji chọpụta na anyị anaghị eche ihu gam akporo inwe ike imata ha. Ihe kachasị mma banyere MetaHuman Onye Okike bụ na anyị nwere ike ịmepụta ụmụ mmadụ dijitalụ ahụ sitere na ngwa weebụ nke Epic Games bipụtara.
1 Mepụta ụmụ mmadụ dijitalụ
2 Debanye maka MetaHuman Onye Okike Oge Okike
3 Kedu otu okike mmadụ dijitalụ si arụ ọrụ
Mepụta ụmụ mmadụ dijitalụ
El ogo nke izu okè dị otú ahụ na mgbe mmadụ na-ahụ ihe odide ndị ahụ na anyị nwere ike ịmepụta n'oge na-adịghị anya na MetaHuman Onye Okike, nke ahụ ga-adị n'oge ọ bụla. Maka ugbu a, anyị nwere ike ibudata ụfọdụ ihe atụ wee hụ vidiyo ndị gosipụtara ogo nke adị n'ezie nke avatar ndị mmadụ ahụ anyị kwesịrị ile anya ma ọfụma ịchọta ụfọdụ nkọwa na-egosi na anyị anaghị emeso ezigbo mmadụ ihe.
Dabere na Epic Games, MetaHuman Onye Okike ga-abụ dị na ọnwa ole na ole site na mmemme nnweta mmalite nke ahụ ga - enyere anyị aka iji ngwaọrụ ndị a gwuo egwu na mbụ.
Karịsịa maka ikike nke n’enye onye obula egwu “Chi” na inwe ike ịmepụta ụmụ mmadụ dijitalụ na mpụga nke ịdị ka onye na-ede ma ọ bụ onye na-agụ anyị dị ka gị.
Debanye maka MetaHuman Onye Okike Oge Okike
Egwuregwu Epic kesara njikọ iji banye na ala gịnị ka anyị ga-eme na-adụ ọdụ banyere ohere nke ịbanye na mmalite ahụ iji nwalee omume na uru nke ngwa weebụ a anyị nwere ike ịnweta site na Chrome; ka dị ka anyị nwere ike ịnweta Geforce UGBU a wee nwaa egwuregwu mara mma dị ka Cyberpunk 2077 ya ray ịchụgharị.
Ebumnuche maka ngwá ọrụ a dị, dabere na Epic Games n'onwe ya, iji belata oge ọ ga-ewe maka ọmụmụ iji mepụta ụmụ mmadụ nwere nnukwu mpụga ọdịdị. Ma ọ bụ na dịka Epic n'onwe ya si kwuo, ọ nwere ike were ọnwa iji mepụta ezigbo mmadụ mmadụ nke ga - eduga na ọrụ dị iche iche na - aga n'ihu dị ka egwuregwu ma ọ bụ ihe nkiri.
Echiche ya belata ọnwa nke nyocha, akụrụngwa, na ndị agha nke ndị na-ese ihe imepụta ndị dijitalụ ahụ, mgbe ị nwere ike ịmepụta ha ọsọ ọsọ na mfe. Eziokwu bụ na ọ bụrụ na ha nwere ike ịmepụta ihe dị ka ihe anyị na-ahụ na onyonyo na vidiyo, ọ nwere ike ịgbanwe mgbanwe nke ndị na-abụghị ezigbo mmadụ.
Kedu otu okike mmadụ dijitalụ si arụ ọrụ
MetaHuman nwere ike -eji na ngagharị kpọọ data ma enwere ike ịfefe ya na ọrụ dị iche iche na-aga n'ihu. N’ikwu ya n’ụzọ ọzọ, e meela ule iji mee ka ihe odide ndị a ruo na nke a na-agagharị agagharị na ọbụna na fim. Ya mere enwere otutu nyiwe nke puru iji teknụzụ a.
Na dị ka ma ọ bụrụ na anyị nọ n'ihu agwa nchịkọta akụkọ nke nke ọ bụla n'ime egwuregwu MMORPG ahụ anyị hụrụ n'oge na-adịbeghị anya, MetaHuman nwere otutu nhazi maka ihe nlere ma ọ bụ ọbụna mepụta ụdị ntutu ma ọ bụ mma niile nke mmadụ.
Ihe na-akpali mmasị banyere ọrụ a site na Egwuregwu Epic na MetaHuman bụ na ọ na-ewepụ onwe ya na mkpụrụedemede ndị ọzọ emepụtara nke ndị ọkachamara na ndị na-abụghị, na-enwe ekele maka nkọwa ndị a na-ejikọtakarị na ịme ihe atụ nke ụdị ihe kpatara ya. N'okwu a ọrụ a bụ nnukwu onyinye.
Epic Egwuregwu egosila na MetaHuman ga-enwere onwe ya iji Engine na-abụghị eziokwu, na ọ bụkwa n'efu, yabụ ọ bụrụ na ịchọrọ igwu egwu chi iji kee ụmụ mmadụ dijitalụ, ị nwere ike ịdebanye aha ugbu a maka akwụkwọ akụkọ iji nata ọkwa nke nnweta ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Ndị okike nke Fortnite ga-ahapụ gị ka ị kpọọ "chi" site na ịmepụta mmadụ dijitalụ